Vonoan’olona, namono tena ? : razana efatra be izao natsingevan’Ikopa | NewsMada
Vonoan’olona, namono tena ? : razana efatra be izao natsingevan’Ikopa
Fandre matetika ihany ny fahitana olona maty an-drano, eny amin’ny reniran’Ikopa. Tsy fahita firy kosa izay niseho, omaly. Razana efatra be izao no indray hita. Ny roa lahy nakarina teny Ampasika, ny roa hafa kosa, tany akaikin’Ambohitrimanjaka.
Faty efatra no indray natsinkafon’ny ranon’Ikopa, omaly maraina. Ny roa tsy lavitra ny tetezan’Ampasika, nahitan’ny olona tovolahy roa manodidina ny 30 taona eo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany maraina. Nampiakarin’ny olona teo amoron-drano ireo razana ireo, izay mbola teny aminy avokoa ny fitafiany rehetra. Voalaza fa naratra ny lohan’izy ireo, nahitana diana mangana ny tenany. Nilaza ny avy amin’ny polisy fa nisy ratra tokoa ireo razana ireo ary efa nalefa any amin’ny HJRA hanaovana fitiliana.
Teny Andranovaky Ambohitrimanjaka kosa no nahitan’ny olona faty roa, lehilahy sy vehivavy. Nambaran’ny olona fa mpivady ireo hita faty ireo, saingy tsy fantatra kosa izay antony nahafaty azy. Ireto farany izay nambaran’ny polisy fa tsy fantatr’izy ireo ny fisiany. Tsy tany amin’ny tranom-paty HJRA ihany koa ny razana roa farany.
Tsy nisy nahafantatra ireo razana voalaza ireo ny olona teny Ampasika. Maro ny nihevitra fa mety lasan’ny rano nandritra ny orambe nikija tato ho ato izy ireo. Tao koa anefa ny nilaza momba ireo razana roa lahy fa mety nisy namono ireo vao natsipy tany anaty rano. “Ny ratra teny amin’ny tenan’izy ireo mety iheverana fa nisy namono tokoa zareo”, hoy ny filazan’ny nahita maso. Ny polisy tonga teny an-toerana koa nametraka ahiahy momba izany, saingy ny tohin’ny fanadihadiana ahafantarana ny tena marina. Efa mandray an-tanana ny raharaha rahateo ny polisy rehefa misy razana hita tahaka izao.
Nimenomenona ny olona
Nampimenomenona ny olona ny fahelan’ny fakana ny razana teny an-toerana. Voalaza fa efa ny hariva vao tonga ny naka izany BMH, raha efa tamin’ny 5 ora sy sasany maraina ny nahitana izany. Nosaronana teo fotsiny ka nitangoronan’ny olona teo. Izay nandalo, nidina teny an-toerana nijery sao mahafantatra ireo maty.
Nisy ny nanome tsiny ny mpitandro filaminana ny amin’ny fahelan’ny fanalana ny razana teny an-toerana. Toe-javatra efa mpiseho ihany izany, izay nambaran’ny mpitandro filaminana fa manao ny fizahana ifotony izy ireo, ary anjaran’ny dokotera avy amin’ny BMH kosa ny manala ny razana eny an-toerana. Manana andraikitra ihany koa ny fokontany amin’ny fandaminana sy ny fiantsoana ny BMH faran’izay haingana. Ireto farany voalaza fa na taraiky ny antso tonga eny amin’izy ireo na noho ny olana eo amin’ny fiara itondrana ny razana. Tsy amin’ny BMH ihany ny olan’ny fahatarana toy izao no mitranga fa amin’ny asam-panjakana amin’ny ankapobeny. Fahataran’ny famonjena amin’ny fanafihana, famonoana afo, sns. Voalaza fa noho ny olana ara-pitaovana sy ny fifandraisana foana izany. Asa hoe rahoviana vao voavaha.